အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက COVID19ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ … – PVTV Myanmar
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက COVID19ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ …
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက COVID19ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသနိုင်ရေး ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များ ထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိသည်များထဲက “ကိုဗစ်လူနာကို အောက်စီဂျင်ပေးနည်း”ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Like – 3.5K Share – 471
Toke Shae says:
2021-07-15 at 9:38 PM
Si Thu Aung says:
နွေဦး နှင့် ဘ ဦး says:
U Kyaw Min Oo says:
2021-07-15 at 9:44 PM
Swe Zin Tun says:
2021-07-15 at 9:48 PM
Public မှာ မှားယွင်းပြီး share
2021-07-15 at 9:50 PM
Htun Ag says:
The letters are so small and can’t see the details
Moe Pwint Phyu says:
2021-07-15 at 10:20 PM
Kyi Thar Mon says:
2021-07-15 at 10:32 PM
ハル コ says:
2021-07-15 at 11:14 PM
Good good dr
Ni Lar says:
2021-07-16 at 12:56 AM
#We Need R2P inMyanmar.
#We Support CRPH.
#We Stand with NUG.
#We Stand with Dr SaSa.
#We Stand with UKyawMoeHtune.
#WeNeed Intervention in Myanmar.
#Respect Our Votes.
#Reject Military Coup.
#We Support CDM.
#How Many Dead Body Need For UN to take Action.
#What Happening in Myanmar.
Thu Ma says:
2021-07-16 at 5:52 AM
2021-07-16 at 9:14 PM
2021-07-18 at 12:14 AM
ဒေါက်တာဖြိုးသီဟရေးသားပြီး နွေဦးကိုကို ဖတ်ရှုတင်ဆက်ထားတဲ့ “ဒီကာလကို ဘယ်လိုကျော်ဖြ…
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါအခြေအနေကို ပိုမိုဆိုးရွာစေနိုင်တဲ့ အကြပ်အတည်းကို နိ…